KULMIYE oo ka hadlay wakhtiga M/weynaha cusub soo magacaabayo Xukuumaddiisa | Xarshinonline News
KULMIYE oo ka hadlay wakhtiga M/weynaha cusub soo magacaabayo Xukuumaddiisa
Hargeysa,(Nnn)- Xisbiga KULMIYE, ayaa ka hadlay War sheegaya in Madaxweynaha la doortay uu magacaabay laba Wasiir oo Xukuumaddiisa ka tirsan. Isla markaana wuxuu ka hadlay wakhtiga uu Madaxweynaha cusub soo magacaabayo Xukuumaddiisa.
Qoraal kooban oo uu ku saxeexan yahay Guddoomiyaha Warbaahinta ee Xisbigaas Maxamed Cilmi Aadan, ayaa wuxuu u dhignaa sidan;
“Waxaa ku soo baxay Wargeysyada qaarkood Warar sheegaya inuu Madaxawaynaha la doortay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu magacaabay Wasiiro hordhac u ah xukuumadiisa Cusub. Haddaba, Xafiiska Madaxwaynahu wuxuu caddaynayaa inaanay jirin haba yaraatee Wasiiro si hordhaca loo magacaabay ilaa hadda. Madaxwaynaha la doortay wuxuu ku mashquulsan yahay sidii uu talooyin iyo afkaaro habboon uga uruursan lahaa aqoonyahanada kala gedisan ee qarankani leeyahay, si uu u soo dhiso dawlad kooban oo tayo leh inshaalaahu tacaalaa.
Madaxwaynaha la dooratay waxaa uu xukuumadiisa oo isku dhan uu soo magacaabi doonaa Hadii Alle yidhaa xiliga uu xilka si rasmiya ula wareego, Qarankana uu u dhaarto sida uu dhigayo dastuurka qaranku.”
← “Codka ugu badan ee maanta KULMIYE ku fadhiyo gobolka Maroodi-jeex ayuu ka helay”
Laascaanood: Madaxii Garsoorka Sool oo la dilay & aragtida Masuuliyiinta Gobolka →